January | 2019 | HimiloNetwork
Himilo January 31, 2019	Leave a comment 275 Views
MUQDISHO (HN) – Qoys ayaa farxad la baroortay markii uu tacsidiisa ku yimid wiilkoodii ay u tiiraanyoonayeen. Wiilkan oo kasoo jeeda xaafad yar oo la yiraahdo Santa Teresa kuna taalla Paraguay ayaa saddex maalin kaddib kusoo laabtay reerkiisa – xilli ay ku dul baroordiiqayeen meydka ay moodayeen inuu isaga yahay oo loo keenay. 20-jirka lagu magacaabo Juan Ramon Alfonso Penayo waxaa markii ...
Himilo January 31, 2019	Leave a comment 388 Views
MUQDISHO (HN) — Tuug ayaa mas u isticmaalay inuu ku xado dukaan. Uuzele Louis ayaa sawirrada maska soo dhigay bartiisa facebook oo ay aad ugu dhex baahday. Arrintan ayaa ka dhacday gudaha New Benin Market ee dalka Nigeria kaddib markii koox ganacsato ah ay waayeen lacag iyo moobilo. Waxay cadaadiyeen qofkii ay ku tuhmeen inuu xatooyada kula kacay. Surwaalka iyo hoos-gashiga ...
Himilo January 31, 2019	Leave a comment 424 Views
MUQDISHO (HN) – Jadav Payeng oo ah nin ku jira da’aadda 50-meeyada, wuxuu tiir-dhexaad u noqday suura-gelinta keyn weyn in laga dhigo kob cidlo ah oo ku dhex taalla webiga Brahmaputra ee gobalka Assam, India. Dadaalkiisa waxaa soo weriyay warbaahinta caalamka iyo dalxiisayaasha. Mulai, oo ay Jadev ugu yeeraan dadka degaanka, wuxuu bilaabay inuu degaanka ka shaqeeyo sannadkii 1980-kii. Mashruuc ay waagaas soo ...
Himilo January 31, 2019	Leave a comment 350 Views
DELHI (HN) — Vishweshwar Dutt Saklani wuxuu dhintay Jan 18, 2019, balse waxaa waligiis jiraysa xusuustiisa iyo magacii uu ka tagay oo ahaa Tree Man of Uttarakhan. Wuxuu ahaa geyfane u halgamay beerista in ka badan shan milyan oo geedo ah. Wuxuu degaankiisa awal ahaan jiray kob lama degaan ah uga tagay keyn baaxad weyn. Saklani wuxuu noloshiisa la dhinac noolaa ...
Himilo January 31, 2019	Leave a comment 482 Views
WASHINGTON, DC (HN) – Kumaankun Muslimiin ah ayaa ugu yeeray Shirkadda Nike ee kobaha sameysa inay dib u eegis ku sameyso kobaheeda cusub Air Max kuwaas oo cagta hoose looga qoray kalmadda Allah oo af Carabi ah. “Nike waxay runtii soo saartay kabo aanan ku habbooneyn in casriga nolosha maanta loo adeegsado sidii la doono maadaama ay ku dhigan yihiin kalmadda ...
Himilo January 31, 2019	Leave a comment 311 Views
MUQDISHO (HN) – Halka Masaajidda ku yaalla dhulka Soomaalida kaliya loo aado tukashada salaadaha iyo dhageysiga muxaadarooyinka, waxaa jira masaajid kale oo dunida Muslimka ku yaalla kuwaas oo sannadihii dhawaa abuurayay tusaalooyin togan oo la xiriira caafimaadka Jamaacadaha ku dukata. Jimicsigu wuxuu kamid yahay waxyaalaha maalinlaha loogu baahan yahay si firfircooni loo geliyo jirka qofka. Haddaba Masjid ku yaalla gobalka ...
Himilo January 31, 2019	Leave a comment 345 Views
MUQDISHO (HN) — Masjid ku yaalla gobalka Halabja ee Kurdistan ayaa xiisad jimicsi ah siinaya Jamaacada Masjidka soo xaadirta Salaadda Subax si ay maalinkooda firfircooni ugu qaataan. “Qof ahaan, jimicsigan waxaan kaga bogsaday jajabka iyo xanuunka dhabarka iyo lafaha,” ayuu yiri Sarkawt Nuri, oo kamid ah Jamaacada. Nuri wuxuu rajeynayaa in jimicsigani sii socdo si dad badan oo isaga lamid ah ...
Himilo January 24, 2019	Leave a comment 483 Views
MUQDISHO (HN) — Shirkadda Duullimaadyada ee Pakistan International Airlines (PIA) ayaa go’aansatay inay rakaabkeeda kusoo dhaweyso Nashiidada Burda Sharif, oo ah mid lagu amaanayo Suubanaha NNKH – halkii lagu soo dhaweyn lahaa muusig dabacsan. Go’aanka waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha Shirkadda, Marshal Arshad Malik. Nashiidada waxaa si gaar ah loogu daarayaa duullimaadyada u socda magaalooyinka Jeddah iyo Madiina. Shirkaddan ayaa aalaaba sameysa ducada safarka ...
Himilo January 24, 2019	Leave a comment 3,472 Views
Himilo January 23, 2019	Leave a comment 409 Views
MUQDISHO (HN) — Jaakado dhowr ah oo ku waran gidaar ku yaalla caasimadda Kashmiir – tan Hindiya ay maamusho – ee Srinagar ayay indhihiisu qabanayaan Ali Mohammed. Waa maalin qabow, badi dadka jidadka marayana waxay xiran yihiin dhar culus oo dhaxanta ay kaga ganbadaan. Mohammed oo hadda ku jira da’diisa 60-jirka, ayaa u dhaqaaqaya dhinaca dhalinyaro agtaagan gidaarka. “Wiilkaygow, imisa ayaad ...